तिहारको रमझम: कोरोनाको जोखिम नभुलौं, आफूपनि बचौं अरुलाई पनि बचाऔं — onlinedabali.com
नेपालीहरुको दोस्रो महान् चाड तिहार ढोकैमा छ । उज्यालोको रुपमा चिनिने यो पर्वले नेपालीहरुको मन उमंगित पार्दछ । दिदीबहिनीहरु दाजुभाइलाई टीका लगाउन जान्छन् । दाजुभाईले आफ्ना दिदीबहिनीलाई उनीहरुको हैसियतअनुसार उपहार दिने गर्दछन् ।
दिदीबहिनी र दाजुभाइको लागि यो महत्वपुर्ण चाड हो । साथै, वर्षदिनभरि खेतबारी जोतेको गोरुलाई पुजा गरिन्छ । गाईलाई पनि लक्ष्मीको रुपमा पुजाआजा गरिन्छ । त्यसको साथसाथै काग र कुकुरलाई पनि निकै महत्व दिइन्छ । तिहारको बेला धर्मकर्ममा विश्वास राख्ने मानव जाति अरु बेला के गर्छौ ।
अघिपिच्छे खाना खान दिँदनौं हामी कुकुरलाई । आखिरी तिहारमा चाहि हामी त्यही कुकुरलाई खोजीखोजी पुजा गर्ने गर्छौ । सडकमा कति सवारी साधनले गाडी किचेको देखिन्छ । कुकुरलाई मानिसहरुले कुट्ने, धपाउने जस्ता निच कार्यहरु गर्दछन् ।
एकदिनको लागि कुकुरलाई अन्न र पानी दिँदैमा धर्म हुन्छ होला ? एउटा माला र एउटा बिस्कुट दिएर कुकुरसँग फोटो खिच्न भ्याउछन् हाम्रो समाजका प्रतिष्ठत व्यक्तिका टोलीहरु । अरुबेला जनावरसँग फोटो खिच्न लाज लाग्ने, जनावरलाई घृणा गर्नेहरु त्यसदिन कुकुरसँग फोटो खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गर्छन् ।
बाटोमा शान्तसँग हिडिरहेको जनावरलाई पहिले हामी आफै चलाउँछौ, जिस्काउँछौ । गाईलाई हामी मानव जातिले गर्ने व्यवहार पनि त्यस्तै छ । गाईले दुध दिउञ्जेल हामी गाई पाल्छौं । त्यसबाट लिनुपर्ने फाइदा लिन्छौं । जब गाई बुढो हुन्छ, दुध दिन्छ छाड्छ अनि सडकमा लगेर मर्नको लागि छोडिदिन्छौं ।
तर, गाई पूजाको दिन गाईको खोजीखोजी पूजा गर्छौ । गाईसँग पनि नाटक देखाउँदै फोटो खिच्ने प्रथा त कायमै नै छ । पहाड र तराईमा अझैपनि गोरुले खेतबारी जोत्ने गरिन्छ । त्यही गोरुले जोतेर उत्पादन भएको खानेकुराहरुले छाक टार्छौ ।
गाईगोरु, कुकुरजस्ता प्राणीहरुको कारण हामी मानवहरुको प्राण जोगिरहेको छ । हामीलाई कसैले पिट्दा कति दुख्छ । कसैले करायो भने कति मन पाल्छ । अन्य जीवजन्तुलाई पनि त्यस्तै नै हो । कुट्ने, हेला गर्ने त हामी नेपालीहरुको स्वभाव नै हो ।
अघिपछि खाना खाइनसकेर कति खाना फोहोरमा लगेर फ्यालिन्छ । तर त्यही खाना भोका जीवजन्तुलाई दिन नेपालीहरुलाई लाज लाग्छ । कागलाई त हामी पानीसमेत दिँदैनौ । तर एकदिनको निमित्त नाटक गर्दे माला लगाइदिने र खाना खुवाउने काम हामीबाट हुन्छ ।
अझै कतिको त जनावरलाई देख्दै रगत तातेर पनि आउदो हो । जनावलाई बिनाकाम गाली गर्ने पनि नेपालीहरुले नगरेको भने होइनन् । अधिकांश नेपालीहरुको बानी जुन दिन आवश्यक पर्छ त्यही दिन मात्र खोज्छौ । अरुबेला त्यसको केही मतलब लाग्दैन् ।
मानव प्राणीलाई सबैभन्दा बुद्धधिजीवी प्राणीका रुपमा समेत चिनिन्छ । तर मानिसभन्दा लोभी र स्वार्थी सायदै कुनै अरु जीव छन् होला । यो त प्राणीलाई लिएर गरिएको एउटा टिप्पणी मात्र भयो । तिहार भनेकै विशेष दाजुभाई र दिदीबहिनीको चाडपर्व हो ।
यसमा पनि कतिपय दिदीबहिनी र दाजुभाइलाई निकै समस्या पर्ने गरेको छ । कतिको दाजुभाइ छैनन् त कतिको दिदीबहिनी । जसको कारण कति दाजुभाइ आफ्नो निधार खाली राख्न बाध्य छन् । तिहारमा देउसी र भैलो निकै विशेष रितिरिवाज हो ।
देउसीभैलो प्रायजसो सबैले खेल्छन् । बालबच्चा मात्र नभई बुढाहरुले समेत देउसीभैलो खेलेर रमाइलो गर्ने गरेका छन् । तर अहिले पछाडिको समयमा केही बर्षअघिदेखि बिभिन्न कलाकारहरुले राजनीतिक दलको संगठन र क्लबहरुले दैउसी भैलोलाई आफनो एउटा कमाउने भाडो बनाएका छन् ।
यसले गर्दा बिकृति फैलिरहेको छ । दैउसी भैलो खेल्न आउने मानिसहरु गाडी रिजर्भ गरेर आउने जाँडरक्सी खाएर आउने जसले गर्दा उनीहरुलाई पैसा धेरै दिनुपर्ने । देउसी भैलो पैसाको लागि खेल्ने हो र ? पहिलेपहिलेको चाडपर्व लिएरर मान्यता नै बेग्लै थियो ।
सबैले रमाइलो र आपसी सद्भावलाई मान्यतामा राखेर चाडपर्व मनाउथे । देउसी भैलो खेल्छन् तर मुखले भट्टाएर होइन् म्युजिक सिस्टम घन्काएर । यसले गर्दा टोलछिमेकमा बस्नेलाई निकै डिस्टर्ब हुन्छ । चाडपर्वको नाममा बेथिति मात्रै फैलिएका छन् ।
तिहारको मयमा महँगीसमेत निकै बढेको सामान किन्न गएको सर्वसाधारणहरुको भनाइ छ । तर, अनुगमनतिर खासै चासो दिइएको पाइदैन् । फलफुल, मिठाइ,, माला, भाइटीकाको लागि आवश्यक सामग्रीहरु छोइनसक्नु भएका छन् । महँगी बढेको बढ्यै छ तर तलब बढदैन् ।
दाजुभाइले पनि टीका लगाइपछि राम्रो उपहार दिन सक्दैन् । त्यसैले कतिले त टीका लगाउन छोडिसकेको छन् । टीका पनि पैसाको लागि मात्र लाउने हो जस्तो भइरहेको छ । टीका लगाएर पैसा कमाउने हो भने यो चाडपर्व नभई व्यापार गर्ने एउटा थलो हो ।
नेपाल सरकार अन्तर्गत गृहमन्त्रालयले चाडबाडको समय हुने आपराधिक घटनालाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि योजना बनाएको छैन् । जाँडरक्सी खाएर होहल्ला गर्ने, कौडा खेल्ने, मदिरा सेवन गरेर वारी साधन चलाउने जस्ता कार्यहरु बढ्ने गर्दछन् ।
अहिले त जाँडरक्सी खाएर देउसीभैलोसमेत खेल्ने गरेको पाइन्छ । देउसीभैलो खेल्न आएकाहरुलाई कम पैसा दिएमा झैझगडा गर्छन् । चाडबाडको बेलामा अधिकांश सवारी साधनका घटनाहरु बढिरहेका छन् । व्यापारीहरुले पनि चाडबाडको मौका छोपेर ग्रहक ठग्नुसम्म ठग्छन् ।
यातायात व्यवसायीहरुले पनि मनलाग्दी भाडा उठाएका छन् । यता, ट्याक्सी पनि मिटरमा हिड्न मान्दैन् । सार्वजनिक यातायातले सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने गर्दछन् । चाडबाडको बेला उनीहरुको व्यापार झनै फस्टाउदो छ । मान्छे मरे पनि यातायात व्यवसायीहरुलाई कुनै फरक पर्दैन् ।
दुर्घटना, जुवा, कौडाजस्ता बेथितिलाई नियन्त्रणमा लिन नेपाल सरकार वा ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख अधिकारीहरुले ध्यान पुप्याएका छैनन् । यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन् । उपत्यकाका मान्छेहरु तिहार मान्नको लागि आफ्नो कोठा ताल्चा लगाएर घर गएका छन् ।
घर सुनसान भएको बेला चोरहरु सजिलैभित्र पस्न सक्छन् । यसको लागि पनि सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाउन जरुरी देखिएको छ । उपत्यका बजारहरु पूरै ढाकिएका छन् । मान्छेको भीड छिचोल्न हम्मेहम्मे छ । सामान खरिद गर्ने देखिलिएर बिक्री गर्नेले समेत स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको छैनन् । यसबाट कोरोना फैलने सक्ने जोखिम बढेको छ ।
तिहार मनाउने नाममा कोही पनि संक्रमित हुन नपारेस् । कसैको घरमा रुवाबासी नचलोस् । यसका लागि हामी आफै सतर्क हुन जरुरी छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी तिहार मनाऔं, करोना संक्रमणबाट ‍आफू पनि बचाऔं र अरुलाई पनि बचाऔं ।